Pamwe unozvirova mumusoro chaimo. Kwakanaka kutumira uye kuraira kukuru.
Chandinonyanya kufarira ndechekuti kana mutengi achidzivirira yavo "Issue46" mumutsetse wenyaya uye ivo vaine yega nhamba yekuburitsa mumutsara wenyaya. Ini ndakanyatsonzwa mumwe achiti, "Ndezvekuti vatinyoreri vedu vagone kuronga maemail akachengetedzwa mune yavo email mutengi."
Uri kutamba neni here? Iwe unondibhadharira mari hombe yekukuudza maitiro ekuvhurika zvirinani uye tinya-maitirwo asi iwe usiri kuda kubuda pamutsetse wenyaya? Rombo rakanaka pamametric iwayo… ..